भगवान शिवको मूर्तिलाई माक्स लगाइदिएको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल, मूर्ति नछुन अपिल – " सुलभ खबर "
भगवान शिवको मूर्तिलाई माक्स लगाइदिएको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल, मूर्ति नछुन अपिल
एजेन्सी- भारतमा भगवानको मूर्तिलाई पनि मास्क लगाइदिएको अचम्मको घटना र तस्विर सार्वजनिक भएको छ । सबैतिर कोरोना भाइ* रसको असर देखिएका कारण मानिसलाई जागरुक गर्नका लागि भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित वाराणसीमा एउटा मन्दिरका पुजारीले भगवानको मूर्तिमा पनि मास्क लगाइदिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
वाराणसीस्थित पहलादेश्वर महादेव मन्दिरका पुजारी कृष्णा आनन्द पाण्डे भगवानको मूर्तिमा माक्स लगाइदिएका हुन् । पछिल्लो समय मन्दिरमा आउने भक्तजनहरुले समेत मास्क लगाउन थालेको र हातले नछोइकन टाढैबाट पूजा गर्न पाण्डेले बताएका छन् ।
यसले कोरोनाबाट बच्न मानिसले अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे सचेतना वृद्धि हुने उनी बताउछन् । उक्त मन्दिरमा भगवानको मूर्तिलाई नछुन पनि अपिल गरिएको छ । कोरोनाका कारणविश्वभरबाट चार हजार बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
यो पनि अरुको यी ६ चिज कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस्, आर्थिक संकट पर्छ
हरेक मानिसको आफ्नै शक्ति हुन्छ, जुन आफ्नै वरिपरि रहने र हामीद्धारा प्रयोग गरिएको वस्तुलाई पनि प्रभावित गर्छ । यस्तो अवस्थामा अरुको चिज प्रयोग गर्नु आफ्नो लागि दुर्भाग्य र आर्थिक समस्याको कारण बन्न सक्छ । यदि कुनै पनि व्यक्तिले अरुको चीज आफ्नो साथमा राख्छ भने उसको सारा नकारात्मक–सकारात्मक शक्ति ऊसँगै जान्छ, जसले लियो ।
के–के हुन् ति चिज ?
कलम – तपाईलाई याद छ, साथीलाई कति ओटा कलम मागेर फर्काउनु नै भएन ? यस्तै धेरै हुन्छ , कि कसैको कलम सापट लिएर फिर्ता दिनै भुलिन्छ । तपाईका लागि यस्तो नगर्नु राम्रो हुन्छ । आर्थिक समस्याको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले भूलेर पनि कसैको कलम आफ्नो साथमा नराख्नुहोस् ।रुमाल – अन्य व्यक्तिको रुमाल प्रयोग गर्नु दुई व्यक्तिबीच तनाव वा झगडाको कारण बन्छ । अरुको रुमाल प्रयोग गर्दा लगातार पैसाको नोक्सानको सामना गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।
घडी – हातमा लगाइने घडीले व्यक्तिमा राम्रो अथवा नराम्रो शक्तिलाई सार्छ । दोस्रोको घडी लगाएमा काममा असफलता तथा आर्थिक नोक्सान हुनसक्ने हुन्छ ।ओछ्यान – कुनै दोस्रो व्यक्तिको ओछ्यानमा सुत्नु पनि वास्तु दोष मानिन्छ । यसो गर्नाले सुत्ने व्यक्तिसँग सधै झगडा वा अन्य धनलाई लिएर समस्या बेहोर्नु पर्छ भनिन्छ ।
धन – कसैको धनमा आँखा लगाउनु वा सापटी लिएर फिर्ता नदिने गर्नु मानिसका लागि आर्थिक समस्याको कारण बन्नसक्छ । त्यसैले, कसैको सापट लिएपछि अवश्य फर्काउनुहोस् ।कपडा – अर्कोको कपडा मागेर प्रयोग गर्नु पनि तपाईका लागि धेरै किसिमका समस्या र दुखहरुको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले अरुको कपडा मागेर नलगाउनुहोस् ।
काठमाडौ । धेरै समलिङ्गी पुरुष र महिलाले विपरीत लिङ्गीका मानिसहरूसँग विवाह गर्छन्। कोही बाध्यताले त
गुन्द्रुक । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको मौलिक परिकारको पहिचान बनाएको एउटा ‘तरकारी’ । भनिन्छ, जहाँ नेपाली पुग्छन्,
कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि ससुराली बसेका एक व्यक्तिले सालीलाई भगाएका छन्। भारतको मध्य प्रदेशको विदिशा
श्रीमानबाट स’न्तुष्ट भएन, बच्चा नजन्मिने देखे भन्दै ….
काठमाडौं । श्रीमानबाट स’न्तुष्ट नभएकी एक श्रीमतीले जे गरिन् त्यसले सबैलाई चकित पारेको छ ।
श्रीमान श्रीमती भनेकाे एक जाेडि हुन् । जुन सात जन्मसम्म समेत छुट्दैनन् । नेपाली समाजमा
विराटनगर, १७ मङ्सिर । मधुमेह नभएको महिलामा समेत गर्भावस्थाको समयमा मधुमेहको समस्या विकसित हुन सक्छ